Magangalyo doon tartiib tartiib u soo galaya dalka xilli hakad ku yimid baaritaankii xudduudaha | Somaliska
Magangalyo doon tartiib tartiib u soo galaya dalka xilli hakad ku yimid baaritaankii xudduudaha
Inkastoo dowladda dalka Iswiidhan ay shaacisay in hakad ku sameeysay baaritaanka xudduudaha, hadana weli waxaa jira qaxooti magangalyo dalkaan weeydiisanaya kuwaas oo ay dalka soo galeen iyagoo boqol kor u dhaafay.
Toddobaaadii hore ayaa dad gaaraya 396 qof, waxaa ay magangalyo weeydiisteen laanta socdaalka kuwaas oo codsiyadooda magangalyo la eeggayo. Tiradan ayaa ah mid 64% ka badan toddobaadkii ka sii horeeyey. sidaana waxaa lugu sheegay tirro koob laanta socdaalka soo saartay. Sidoo kale bishii abriil ee sanadkan ayaa waxaa codsi magangalyo soo . weydiistay 1572 ruux, marka la bar bar dhigo sanadkii hore isla bishii abriil oo dad lugu qiyaasay 2065 ay is dhiibeen.
Ugu dambeyntii bishan maajo horaanteedii (afarta bisha sanaad) ayaa waxaa ha kad ku yimid baaritaanidii xudduudaha oo gaadiidkii iskaga kala gooshi jiray la weydiin jirtay aqoonsi. Tanina waxaa ay markale albaabada u furtay magangalyo doon rajo ka qaba in Iswiidhan ay siiso sharci iyo daganaan.
May 26, 2017 at 01:53
Aac jimcale warbixinta ma shegtay jidkan inta ow furnaan dono ??